YAAB: Ma Midabkaa Argagax Ku Abuuraya? Real Madrid Oo Guuldaro Kala Soo Kulantay Koox Kasta Oo Midabka Barcelona Leh Iyo Xog Layaableh Oo Ka Soo Baxday Guuldaradii Eibar. - Gool24.Net
YAAB: Ma Midabkaa Argagax Ku Abuuraya? Real Madrid Oo Guuldaro Kala Soo Kulantay Koox Kasta Oo Midabka Barcelona Leh Iyo Xog Layaableh Oo Ka Soo Baxday Guuldaradii Eibar.
Kooxda Real Madrid ayaa guuldaro bahdilaad ah kala soo laabtay kulankii ay martida u ahayd Eibar ee horyaalka La Liga waxayna Los Blancos soo bandhigtay mid ka mid ah bandhigyadii ugu xumaa ee kooxdeeda ee sanado badan waxayna hadda ku jirtaa xaalad kale oo aan fiicnayn inkasta oo Solari uu qaab fiican ku bilawday muddadii uu kooxda joogay.
Markii ay maamulka Real Madrid heshiis waqti dheer ah ku abaal mariyeen Santiago Solari waxay kooxdiisu bilawday in ay u muuqatay qaabkii waqtigii Julen Lopetegui ama ka liidataba. Min difaacasho ilaa weerar ayay Rela Madrid u noqotay koox aan wax tar lahayn iyada oo Courtois uu ku jiro xaaladii ugu xumayd ee waayihiisa ciyaareed.
Laakiin waxaa jirta arin khaas ah oo ka soo ifbaxday ciyaartii Real Madrid iyo Eibar waana midabka xili ciyaareedkan musiibada ku soo noqday Real Madrid kaas oo koox kasta oo xidhnayd ay saddexda dhibcood ka tirsatay Los Blancos.
Haddii ay kooxdu xidhan tahay midabka buluuga iyo casaanka waxay Real Madrid ku soo ahayd koox guuldaro soo baday waxayna keentay in lays waydiiyo haddii ay ciyaartoyda Real Madrid maskax ahaan ugu dhibtoonayaan midabka kooxda ay xifiltamaan ee Barcelona.
Wax walba waxay ku bilawdeen qaladkii Toni Kroos ee goolkii Nikola Vlasic ee kulankii CSKA Moscow markaas oo ay Real Madrid guuldaro 1-0 ahi ka soo gaadhay kooxda CSKA Moscow oo xidhnayd midabka casaanka iyo buluuga wana waqtigii uu Lopetegui dhibta wayn ku dhex jiray.
Maalmo kadib midabkii buluuga iyo casaanka ahaa ayaa yimid Estadio Santiago Bernabeu iyada oo kooxda Levante soo booqatay Real Madrid waxayna si layaableh u awooday in ay guul taariikhi ah oo 2-1 ah ay Madrid ka gaadhay waxaana goolasha u dhaliyay Jose Luis Morales iyo Rodger Marti.
Intaas sheekada qariibka ah ee Real Madrid kumay joogsan balse waxay siddeed maalmood kadib kulankii Levante ay booqatay xarunta midabka buluuga iyo casaanka ee Camp Nou waana kulankii El Clasico-da ee ay Real Madrid la soo kulantay guuldaradii ceebta ahayd. Luis Suarez ayaa kulankan saddexley goolal ah ka dhaliyay.
Barcelona ayaa 5-1 ku soo xasuuqday Real Madrid wuxuuna noqday kulankii ugu danbeeyay ee Julen Lopetegui uu shaqadiisii Madrid ku waayay iyada oo kulankii saddexaad ee midabka buluuga iyo casaanka ahii waqti kooban Madrid baday saddex guuldaro.
Laakiin xaalada ayaan isbadalin waxayna kooxda Santiago Solari ee Real Madrid markale muujisay in kooxaha midabka aan soo sheegnay wataa ay xili ciyaareedkan maskax ahaan u dhibaataynayaan iyada oo Eibar markale noqotay kooxda liiskan ku biirtay.
Kooxda Eibar ayaa kulankii ka dhacay Ipurua waxay Real Madrid ka gaadhay guul 3-0 ah iyada oo waliba xataa goolal ka badan guul ku gaadhi kartay waxayna arintani si cad oo aan qarsoodi ahayn u muujisay in ay jirto dhibaato ciyaartoyda Madrid xili ciyaareedkan ka haysata kooxaha midabka casaanka iyo buluuga xidhan.
Guuldarada Real Madrid ka soo gaadhay Eibar ayaa timid kadib markii uu Solari afar kulan oo xidhiidh ah uu guul soo gaadhsiiyay Madrid isla markaana uu qalinka ku duugay qandaraas rasmi ah oo uu kooxda ku joogayo 2023 balse haddii ay xaaladu sidii Lopetegui ku soo laabto waxa uu mari doonaa dariiqii saaxiibkiisii hore ee Madrid.